Fiovan'ny toetr'andro Reef Resilience
Fiheverana momba ny fiovan'ny toetr'andro
Ny rivo-doza Frances dia manatona an'i Florida amin'ny Septambra, 2004. Sary natolotry ny NASA sy NOAA.
Manana fotoana sarotra ny mpahay siansa hamaritana raha miova ny fiovaovan'ny toetr'andro (indrindra ny fiakaran'ny hafanana) izay niova ho an'ny fiovan'ny toetr'andro. Izany dia vokatry ny fiovaovana voajanahary lehibe amin'ny haavony sy ny hamafin'ny oram-baratra tropikaly (ohatra, noho ny El Niño Southern Oscillation), izay manasarotra ny fitadiavana ny fironana maharitra sy ny fampitomboana ny fitomboan'ny gaza. Ny antony hafa dia ny famerana ny fahafahana sy ny kalitaon'ny firaketana ara-tantara manerantany momba ny oram-baratra tropikaly, ny tsy firaharahiana ny fomba fitiliana amin'ny asa, ny toetran'ny toerana misy azy, ary ny faritra voafetra izay nokarohina.
Hatramin'ny tapaky ny 1970, ny tombam-bidy maneran-tany ny mety hitrangan'ny rivo-doza dia mampiseho ny firoboroboana avo lenta mifamatotra amin'ny fiakaran'ny mari-pahaizan'ny ranomasina tropikaly. ref Ny isan'ireo rivo-doza mahery (Category 4 sy 5) dia nitombo tamin'ny 75% hatramin'ny 1970, ary ny fitomboana lehibe indrindra hita any amin'ny Oseana Indianina, Avaratra ary atsimo-atsinanana. Ny habetsaky ny rivo-doza ao amin'ny Atlantika Avaratra dia ambony noho ny mahazatra nandritra ny folo taona farany. Na izany aza, ny fampivoarana ny fahafahantsika mijery rivo-doza dia mety hanosika azy ireo hahazo tombony. ref
Araka ny tatitry ny IPCC farany, "mety hampihena na tsy miova ny vanim-potoanan'ny rivodoza tropikaly mandritra ny taonjato 21, raha toa ka mihamitombo ny hafanam-po (ny haavon'ny rivotra sy ny tahan'ny rotsak'orana)." (IPCC 2013)
Na eo aza ireny fanamby ireny, maro ireo tetikasa amin'ny ho avy izay mifototra amin'ny famolavolana avo lenta no manoro hevitra fa ny fiakaran'ny hafanana dia mety hiteraka tafiotra mahery kokoa amin'ny tafio-drivotra mahery vaika (miaraka amin'ny fampitomboana ny 2-11% amin'ny 2100). Na dia mihena aza ny fandalinana sasantsasany amin'ny tontolon'ny haavo isan-karazany amin'ny rivo-doza tropikaly, dia mitombo ny isan'ny fitomboan'ny rivo-doza. ref
Fiantraikany eo amin'ny Ecosystems Coral Reef
Raha mitombo ny fahatomombanan'ny oram-baratra, dia mila fotoana lava kokoa ny vatohara ho an'ny fanarenana avy amin'ny fiantraikan'ny hetsi-panoheran'ny tafio-drivotra. Ny fiantraikany mivantana avy amin'ny tafio-drivotra avy amin'ny oram-baratra dia ahitana ny fanesorana sy / na ny fanesorana ny sisin'ny vatohara, ny fandroahana ny vatohara goavam-be, ny fanimbana ny vatohara, ary ny korontana amin'ny korontana. Ny fitomboan'ny fiantraikan'ny rivo-doza koa dia mety miteraka karazan-javamaniry matevina (tompon'andraikitra amin'ny harefo indrindra amin'ny haran-dranomasina) mba hihena haingana kokoa noho ny ampahany amin'ny hara-bato goavambe, ka mahatonga ny fahasarotan'ny rafi-pitantanana amin'ny haran-dranomasina. ref
Mety hahasoa ny vatohara indraindray ny tafio-drivotra
Ny rivo-doza lehibe dia tena mahasoa ny vatohara. Ohatra, ny rivo-doza dia afaka manamaivana ny fivalanana ho an'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny fotoana fohy amin'ny toetr'andro any an-tanan-dehibe, ka mampihena ny fiakaran'ny hafanana. ref Ny rivo-doza koa dia mety hampihena ny habetsaky ny zanatanin'ny karaoty izay mora kokoa amin'ny fiakaran'ny hafanana (ohatra: ny zana-boanjo sy ny lozam-pifaneraserana) izay mety hanjakan'ny vatohara izay tsy mahazatra ny tafio-drivotra, ka hampihena ny fahasimbana mety hitranga any aoriana. Ny rivo-doza tropika koa dia afaka manafoana ny macroalgae tafahoatra, izay afaka mametra ny fisorohana sy ny fitomboan'ny haran-dranomasina, na dia mety hiteraka fiovana amin'ireo vondrom-piarahamonina algal aza ny fahasimban'ny riaka taorian'ny rivo-doza. ref Mazava fa ny fifangaroana amin'ny fahavoazana sy ny fialana dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fikorontanan'ny vatohara. ref
Ankoatr'izany, ny oram-batravatra mahery vaika dia mety mitarika ho amin'ny fahasimbana kokoa noho ny vatohara noho ny fisondrotan'ny tondra-drano, fampidiran-drano avy amin'ny rano sy ranomamy avy amin'ny rano avy amoron-dranomasina, ary ny fiovan'ny fitaterana sedim-pitaterana (mitarika ho amin'ny fitrandrahana haran-dranomasina). Rehefa mihabetsaka kokoa ny oram-batravatra dia mety ho mora kokoa ho an'ny fanesoana ranomaso ary noho izany dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny rivo-doza. ref
Ny fahasimban'ny tafio-drivotra amin'ny haran-dranomasina dia tena malemy ref noho ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny tafiotra noho ny habetsahany, ny habeny, ary ny hetsika. Ny fahasimbana dia mety miova amin'ny fanesorana ny fivoahan'ny vatohara manontolo (mihoatra ny 10s mankany 100s metatra) eny amin'ny lalana mivantana avy amin'ny tafio-drivotra, ho an'ny fanimbazimbana ny kolonely tsirairay any amin'ny faritra voatokana kokoa. ref Ny fahasimbana koa dia mety ho voatarika amin'ny tantara manakorontana, ny haben'ny haran-dranomasina, ny karazana fiaraha-monina coral, ary ireo toe-javatra iainana ara-tontolo iainana toy ny fakana aina sy ny fifehezana. ref
Ny fahasamihafana koa dia miovaova be ary miankina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny sehatra maro, ohatra, ny haben'ny fanelingelenana, ny fampiasana ny lava avy amin'ny vatohara tsy maty, ny fametrahana ny substrate ho an'ny fitrandrahana haranitra, ary ny karazana vondrom-piarahamonina coral izay nisy tamin'ny fotoanan'ny korontana.ref Ny fiovaovan'ny rivo-doza ihany koa dia mandrahona ny toerana misy ny vatohara ho an'ny vatohara toy ny honko. Ohatra, ny fiantraikan'ny tafio-drivotra goavambe dia niteraka fahafatesan'ny mangatsiaka be tany Karaiba. ref